एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, १८ चैत २०७५) | गृहपृष्ठ
Home लगानी कम्पनी विश्लेषण एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, १८ चैत २०७५)
on: April 01, 2019 कम्पनी विश्लेषण, लगानी
एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, १८ चैत २०७५)
कम्पनीले पूँजीवृद्धिका लागि चैत २५ गतेदेखि ६० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्दै छ । रू. सय अंकित दरको ७५ लाख ४० हजार ३ सय ५२ दशमलव ७३ कित्ता हकप्रद शेयर जारी गर्नेछ । फागुन २१ गतेसम्म शेयर किन्ने शेयरधनीले हकप्रद खरीदका लागि आवेदन दिन सक्छन् । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब २५ करोड छ । यो हकप्रद शेयर निष्कासन तथा बाँडफाँट गरेपछि पूँजी रू. २ अर्ब १ करोड पुग्नेछ । कम्पनीको ६२ दिनको कारोबार अवधिमा शेयरमूल्य अधिकतम रू. ६ सय ८४ र न्यूनतम रू. ३ सय ८१ पुगेको छ ।
विक्री चाप : कम्पनीको आइतवार भएको शेयर कारोबारमा अन्तिम समयसम्म खरीद चापको तुलनामा विक्री चाप बढी छ । सो अवधिसम्म २ हजार ८ सय ४९ कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग र ६ सय ९८ कित्ता शेयर खरीद गर्ने माग थियो ।
कम्पनीको ६३ दिनको कारोबार अवधिलाई लिएर गरिएको मैनबत्ती विश्लेषणमा अन्तिम दिनमा ओपनिङ कालो मारुबोजु आकृति बनेको छ । यस्तो आकृतिले कम्पनीको शेयरमूल्य आगामी दिनमा घट्ने संकेत गर्छ । आरएसआई ओभरसोल्ड जोन २२ दशमलव ६९ विन्दुमा छ । यसले शेयर विक्री चाप बढेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएशन २ दशमलव ७५ विन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून छ । यस्तो अवस्थामा कम जोखिम हुन्छ भने प्रतिफल पनि कम हुने गर्छ । त्यस्तै, कम्पनीको मुभिङ एभरेजमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत एकअर्कासँग टाढिएका छन् । हालको मूल्य यी दुई रेखाभन्दा तल छ । पछिल्लो शेयरमूल्य रू. ३ सय ९० देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महँगिएमा रू. ४ सय १ मा प्रतिरोध पाउने र मूल्य सस्तिएमा रू. ३ सय ८१ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।
एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, १५ असार २०७६)
एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको बोलकबोल शुक्रवार खोलिदै